अभिताभ बच्चनले बलिउड इंडस्ट्रीमा प्रवेश गरेको ५० वर्ष पूरा , कुन थियो पहिलो फिल्म ? - Birgunj Sanjalअभिताभ बच्चनले बलिउड इंडस्ट्रीमा प्रवेश गरेको ५० वर्ष पूरा , कुन थियो पहिलो फिल्म ? - Birgunj Sanjal
बलिउडका महानायक अभिताभ बच्चनले केही दर्शक यता ब्लकबस्टर फिल्म दिइराखेका छन् । आज अभिताभले बलिउड इंडस्ट्रीमा प्रवेश गरेको ५० वर्ष पूरा भएको छ । जसले गर्दा उनलाई विभिन्न माध्यमबाट बधाई दिइराखिएको छ ।
यसैक्रममा अमिताभ बच्चनको छोरो अभिषेकले इंडस्ट्रीमा गोल्डेन जुब्ली भएकोमा एक भावुक स्टाटस लेख्दै बधाई दिएका छन् । उनले पिताको तस्विर सेयर गदै यस्तो लेखेका छन् । “एक पिताको नाताले होइन, एक अभिनेता र फ्यानको नाताले ५० साल पुरा गरेकोमा बधाई छ । हामी सबै धन्य छौँ , धेरै कुरा सिक्न र बढावा दिनका साथै धेरै पुस्ताले भनोस सकोस हामी बच्चनको एरामा छौँ । अझै ५० सालको लागी लव यू ।”
अमिताभले १९६९ मा फिल्म हिन्दूस्तानीबाट बलिउडमा डेब्यू गरेका थिए । उनको आज कै दिन ७ नोबेम्बरमा उक्त फिल्म रिलिज भएको थियो । यस फिल्म पछि उनले राजेश खन्नाको साथमा आनन्दमा डाक्टरको भूमिका निभाएका थिए । यस फिल्मबाट अमिताभलाई पहिलो पटक फिल्मफेयरको बेस्ट सर्पोटिङ भूमिकाको अवार्ड मिलेको थियो । उनको फिल्महरु जंजीर ,आनन्द, शोले , दिवार , डन , कुली , अग्निपथ , ब्लैक , पा ,पीकूको सफल फिल्म हो
सीमा बचाउ अभियानले बुझायाे भारत अतिक्रमित ७१ ठाउँका भूभागसहितकाे नक्सा